Iingxelo zokufa kwee-Blu-ray kunye neeDVD zixhomekeke kakhulu kwi-NAB Bonisa iindaba nge-Broadcast Beat, i-Broadcast of Broadcasting yeNAB Show - NAB Bonisa LIVE
ikhaya » Okufumaneka » Iingxelo zokufa kwee-Blu-ray neeDVD zixhomekeke kakhulu
(umthombo wesithombe: Pixabay)
Oh sithandwa. Kwakhona kwakhona "iingcali" eziqhelekileyo zihlawula i-knell yokufa "yeendaba eziphathekayo," eli lizwi kumaCD, iiDVD, ii-Blu-rays, kunye nezinye iindlela zokuzonwabisa ezirekhodiweyo. Ingqiqo kukuba abathengi abaqhelekileyo baya kushiya amajelo angokwenyama ngokukhawuleza ngenxa yokusasaza ngenxa yokuba (a) ukusasaza kuninzi "kulungelelwano" kunokuba kunzima ukunyamekela ukulayisha idiski kumdlali, kwaye (b) bacinge ngemali yonke aba bantu abaqhelekileyo abaxhasi baya kusindisa xa bayeka ukuhlawula iifilimu zabo ezizithandayo kumaDVD ne-Blu-rays!
Le ngcamango ayiyinto entsha. Ngaphezulu kweminyaka emihlanu edluleyo, Rich Smith kwi Motley Fool avumile ukuba ii-Blu-rays zinike "ukucoca, kucacisa ukucinga" kunokugqithisa, kodwa kumhlathi wakhe olandelayo, wavakalisa ukuba "i-Blu-ray nayo i-toast. Kuphelile. Netflix, kunye nezinye iinkonzo zokusakaza ngeke kungcwaba kwaye kwiminyaka embalwa, akukho mntu uya kukhumbula ukuba iBlu-ray yayikhona. "
Le ngqungquthela yakutshanje yokududuza iindaba eziphathekayo zaqala ngoFebruwari walo nyaka xa kwabikwa ukuba i-Samsung ayigcinanga kuphela ukuveliswa kwe-4K yabo UltraHD Abadlali be-Blu-ray, kodwa bebengaphange benze ezinye ze-1080p Blu-ray abadlali kunye nabo. Zidibene Oppo ukukhupha ngaphandle kwe-Blu-ray player market kwi-Ephreli yangaphambili, oku kubonakala kuqinisekisa ubungqina bokuba abaqeshwe ngabangena.
Ukongeza umbane emlilweni I-Motion Picture Association yaseMelika yonyaka weNgxelo yokuThengiswa kweeNdleko zeKhaya (ITHEMU) Ingxelo Ngo-Matshi ebonise ukuba ukuthengiswa kweendaba eziphathekayo kwaye kwaphela malunga ne-50%. Njengoko USamuel Axon e-Ars Technica wachaza, "Ngokutsho kwedata, efunyenwe kwi-DEG kunye ne-HIS Markit, ukuthengiswa kwehlabathi kweefomati ze-disk ... kwakuyi-$ 25.2 yezigidigidi kwi-2014 kodwa kuphela i-13.1 ye-2018 kuphela."
Kwaye kukho into ekuthiwa ikhefu lokugqibela kwi-bhokisi yeendaba eziphathekayo: ukuphuculwa kobugcisa kwi-streaming. Ngaphakathi Inqaku lika-Apreli kwi-Home Theater Review.com, UJerry Del Colliano wachaza ukuba "idayili yesilivere iya kwindlela yenyoni yaseDodo," yachaza ukuba kutheni. "Ewe, HD Ukusasaza kinda kulandelwa nje kutshanje nje kwiminyaka embalwa edlulileyo, kodwa namhlanje kusondele kakhulu ekusebenzeni kwi-UHD Blu-ray yokuba abaninzi abantu baya kufuna ukutshintshela uluhlu lwamaphepha e-movie kunye nokuthengwa ngale ndlela ngokubhekiselele kwiidiski ezithunyelwe nge USPS. "
Iimvumi ezimbi kubaqokeleli bamabhayisikobho aseklasini kunye neethungelwano ze-TV kwiDVD kunye ne-Blu-ray, eh? Kodwa ngokukhawuleza! Kungakhathaliseki ukuba ubunjani bekhwalithi yobugcisa bokuphucula ukuphucula okanye indlela engcono ngayo kubaxhasi, kukho enye inkulu, engenakuphikiswa ukuba ababhali abanjengoSmith noDel Colliano badlule ngokugqithiseleyo ukuhlalutya kwabo: ukuhlala isigxina. Ngamanye amagama, xa unayo i-movie okanye umboniso weTV kumaphephandaba angokwenyama, kungokwakho ukubukela nanini na kwaye uthanda kangakanani.
Uyabona, ukhetho lwezihloko iinkonzo zokusakaza ezifana ne-Netflix, i-Amazon kunye ne-Hulu zibonelela ngathi zinomtsalane, kodwa zenza inceba yezivumelwano zokuqhuba ilayisenisi zineziklasi ezenza loo mveliso. Kwaye njengokuba nabani na oye waya enkathazweni yokumisela umgca kwi-Netflix yefilimu abaceba ukuyibuka baya kukuxelela, kukho ithuba elihle lokuba malunga naliphi na loo mafilimu akayi kuba khona xa usenza isigqibo sokuba ukhona isimo sengqondo sokuzijonga. Esikhundleni sokuba umbukeli uya kufumana umyalezo ochaza ukuba ilayisenisi yefeshini embuzo iphelelwe yisikhathi.
UJoshua Piercy wabethelela ngelo xesha Ngomhla kaFebruwari inqaku le-220-Electronics esithi "Kutheni i-Physical Media ayiyi kufa." Njengoko uPercy wachaza, "akuyiyo yonke into ekhoyo ngokuhamba. Kukho inani elikhulu lomxholo kwihlabathi elingenayo, kwaye akalokothi lenze, libe nasiphi na iqonga lokusasaza. Okubi nakakhulu, ukubonisa ukuba uyonwaba namhlanje unokususwa nanini na! Kwiwebhusayithi yabo, iNetflix ibhala: 'I-Netflix iilayisenisi iimiboniso zeTV kunye namabhayisikobho avela kwii-studio kunye nabanikezeli bokuqukethwe emhlabeni jikelele, kwaye ezo malayisenisi ziphela xa singazivusezi. I-Netflix ithi baqala ukukhangela ukujonga ukuba amalungelo ayenayo kwaye ahlalutye ukuthandwa kwamanani kunye neendleko. Baye baqonda nayiphi na iimeko ezithile zonyaka okanye ezinokuthi zichaphazelekayo. Ezi zichaza indlela iNetflix, phakathi kwezinye iinkonzo zokusakaza, ilahlekelwa ngumxholo onokuba ngumtsalane we ... Xa usebenzisa isevisi yokuhambisa, ngokusemthethweni awuyi 'eyakho' le vidiyo; zathengisa iinguqulelo zedijithali zefilimu ezi zinto. "
Ngokubhekiselele kumbandela wokugcina isigxina, u-Piercy wagqiba ngokugqibeleleyo, "Ukulayishwa kweendaba ezidijithali kunye nokuqulatheka kwimixholo ngokuqinisekileyo akuyi ndawo naphambili kwikamva elibonakalayo. Benza, ewe, bakhonza njengendlela yokuzonwabisa yoncedo. Ukuba nobutyebi bomxholo kwizandla zakho, ukulungele ukusasaza nangaliphi na ixesha, ingumxholo wodwa wecala. Oku kuya kuqhubeka kukhula kwiminyaka ezayo. Imidiya yezobugcisa ayisoze yashiywa emva kwayo, nangona iteknoloji entsha. "
Ngo-Matshi, uFrancois Richard wancenga lo mbono welanga ngekamva leendaba kwiwebhsayithi yeLe blog. "IPanasonic, uvulindlela, Sony, kunye nabadlali be-LG Blu-ray baya kusebenzisa ithuba lokushiya emva kweSamswana kunye no-Oppo ukwabelana ngeemarike kwaye banikeze bonke abanomdla kwiindawo zasemakhaya ngezixhobo zokunandipha ukuthanda kwabo, ngethemba lokuba, kuza iminyaka emininzi, "uRichard wabhala. "Ngamnye waba bavelisi baquka abadlali abaliqela kwikhathalogu yabo, ezinye zazo ziyimodeli ephezulu. Ukuthi ngqo, Sony, I-Panasonic, kunye noPhayona bazuzwa kwisithuba esishiywe ngu-Oppo kwi-market ye-audiophile UHD 4K ye-Blu-ray player market: Sony kunye nomdlali we-UBP-X1000ES, iPanasonic kunye nomdlali we-DP-UB9000, kunye nomPhayona nge-UDP-LX500 kunye ne-UDP-LX800. Musa ukwenza iphutha, i-UHD 4K Blu-ray ayifile kwaye yindlela efanelekileyo yokufumana umfanekiso omkhulu kwiNgcaciso ePhakamileyo nephezulu.
Futhi ungakulibali imarike ye-MOD (eyenziwe ngokufunwa) iiDVD, ezibonelela abalandeli be-cinema yeklasi kunye neefowuni ezingabonakaliyo zefilimu ezingasayi kuba zibhenela kubathengi abaqhelekileyo. Abaxwayisi, i-Fox, kunye ne-Universal baqhubeka bekhulula ama-classic kwiindawo zabo zokukhusela ezikhunjini abaziqokeleyo. Uqoqo lweCriterion luyavelisa ukukhishwa kwee-deluxe ze-movie zakudala kunye nobutyebi beempawu ezizodwa ngokunjalo. Akukho nanye kwezi nkampani eziye zabonisa ukuba ziyakunciphisa ukuveliswa kwemveliso yazo yevidiyo, kuncipha kakhulu.
Ngoko buck, abalandeli bevidiyo! Abasemagunyeni abaqhelekileyo bebetyhola "imidiya yempilo iyadlalwa" idrama iminyaka kwaye kwaye, ngokumangalisa, iiDVD nee-Blu-rays zisenathi. Hayi, imidiya ebonakalayo ayiyi kuba "inqanawa" okanye "iya kwindlela yeentaka ze-dodo," kungakhathaliseki ukuba yintoni enye "ingcali" ekuxelela yona.
Amazon Iblu ray Iqoqo leCandelo DVD I-A-A, Iinkqubo ezahlukeneyo, UGraham Chapman uVikelelwa kuMhleli HULU LG NetFlix Oppo Panasonic vu lindlela Samsung SoftAtHome, MStar, iCES2017 Sony Iintetho kunye nemisrya I-Ultra HD Forum	2019-05-31
Previous: Iiprojekthi zeBhodi yaseBelgium ukuphuculwa kweeVideos kwimiqulu engezantsiI-software ye-software ezisebenzisa kwiiprojekthi eziphezulu-
next: UMphathi oyiNtloko, ukuThengiswa kweDawulo